कालो प्वालहरू के हुन् र ती कसरी गठन हुन्छन्? नेटवर्क मौसम विज्ञान
यो निश्चित छ कि यदि तपाईं ब्रह्माण्ड र आकाशगंगाको कुरा गर्नुहुन्छ जुन तपाईंले सुन्नुभयो कालो प्वाल। तिनीहरू धेरै डराउँछन् र यो सोच्दछ कि तिनीहरू यसलाई विभाजित गर्न प्रवेश गर्ने सबै चीजहरू निगल्न सक्षम छन्। आज हामी ब्रह्माण्डका यी तत्वहरू र उनीहरूसँग भएको महत्त्व वा खतराको बारेमा कुरा गर्ने छौं। तपाईं जान्न सक्नुहुन्छ कि कालो प्वालहरू के हुन्, कसरी उनीहरू गठन हुन्छन् र उनीहरूको बारेमा केहि उत्सुकताहरू।
यदि तपाईं यसको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको पोष्ट is हो
1 कालो प्वाल के हो
2 कालो प्वाल का विशेषताहरु
3 ब्ल्याक होल पावर
कालो प्वाल के हो
यी कालो प्वालहरू अस्तित्वमै बन्द भएका पुराना ताराहरूको अवशेष बाहेक अरू केहि छैन। ताराहरूसँग प्राय: सामग्री र कणहरूको बाक्लो रकम हुन्छ, त्यसैले, गुरुत्वाकर्षण शक्तिको ठूलो मात्रा। तपाईंले भर्खरै हेर्नुपर्दछ कि सूर्य कसरी निरन्तर रूपमा surrounding ग्रह र अन्य ताराहरू यसका वरिपरिको छेउमा सक्षम छ। सूर्य को गुरुत्वाकर्षण को लागी धन्यवाद छ किन सौर्य प्रणाली. पृथ्वी यसमा आकर्षित हुन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि हामी सूर्यको नजीक हुँदै गइरहेका छौं।
धेरै ताराले आफ्नो जीवन सेतो बौने वा न्यूट्रन ताराहरूको रूपमा समाप्त गर्दछ। कालो प्वालहरू यी ताराहरूको विकासको अन्तिम चरण हो जुन सूर्यभन्दा धेरै ठूलो थियो। यद्यपि सूर्यलाई धेरै ठूलो मानिन्छ, यो अझै पनि एक मध्यम तारा हो (वा सानो भए पनि यदि हामी यसलाई अरूसँग तुलना ग .्यौं भने)। । यस प्रकार सूर्यका १० र १ times गुणा आकारका ताराहरू हुन्छन्, जब ती अस्तित्वमा रहन्छन्, ब्ल्याक होल बनाउँदछ।
यी विशाल ताराहरूले उनीहरूको जीवनको अन्तमा पुग्दा तिनीहरू विशाल प्रकोपमा विस्फोट हुन्छन् जसलाई हामी सुपरनोवाका रूपमा चिन्छौं। यो विस्फोटनमा, धेरैजसो तारा अन्तरिक्षको माध्यमबाट तितरबित हुन्छन् र यसका टुक्राहरू लामो समयको लागि अन्तरिक्ष मार्फत भौंतारिन्छन्। सबै तारा विस्फोट र स्क्याटर होइन। अन्य पदार्थ जुन "चिसो" रहन्छ त्यो पग्लदैन।
जब एउटा तारा जवान छ, आणविक फ्यूजनले ऊर्जा र स्थिर दबाव सिर्जना गर्दछ बाहिरी गुरुत्वाकर्षणको कारण। यो दबाब र यसले सिर्जना गर्ने उर्जाले यसलाई सन्तुलनमा राख्दछ। गुरुत्वाकर्षण स्टारको आफ्नै जन द्वारा सिर्जना गरिएको हो। अर्कोतर्फ, जड अवशेषहरूमा रहन्छ जुन सुपरनोवा पछि रहन्छ त्यहाँ कुनै शक्ति छैन जुन यसको गुरुत्वाकर्षणको आकर्षणको प्रतिरोध गर्न सक्छ, त्यसैले ताराको बाँकी भाग आफैमा फिर्ता सुरु हुन्छ। यसले कालो प्वालहरू उत्पन्न गर्दछ।
कालो प्वाल का विशेषताहरु
कुनै पनि शक्तिले गुरुत्वाकर्षणको कार्य रोक्न सक्षम नगरी, एउटा कालो प्वाल देखा पर्छ जुन सम्पूर्ण खाली स्थानलाई सinking्केत गर्न र यसलाई शुन्य गर्न सक्दछ जबसम्म यो शून्य खण्डमा पुग्न सकेन। यस विन्दुमा, घनत्वलाई असीम भन्न सकिन्छ। त्यो भन्नु पर्ने हो, शून्य खण्डमा हुन सक्ने पदार्थको मात्रा असीम छ। त्यसकारण, त्यो कालो पोइन्टको गुरुत्वाकर्षण असीम पनि छ। यस्तो आकर्षणको शक्तिबाट बच्न सक्ने केहि छैन।
यस अवस्थामा, तारामा रहेको प्रकाश पनि गुरुत्वाकर्षण शक्तिबाट उम्कन सक्षम छ र कक्षा आफैमा जालमा पर्थ्यो। यस कारणले यसलाई ब्ल्याक होल पनि भनिन्छ किनभने प्रकाश पनि अनन्त घनत्व र गुरुत्वाकर्षणको यस खण्डमा चम्काउन सक्षम छैन।
यद्यपि गुरुत्वाकर्षण शून्य भोल्यूमको बिन्दुमा मात्र असीमित छ जहाँ ठाउँ आफैंमा मिल्छ, यी कालो प्वालहरूले पदार्थ र उर्जा एक अर्कातिर तान्छन्। यद्यपि, पछि नडराउनुहोस् बल जुन उनीहरूले अन्य निकायहरुलाई आकर्षित गर्छन् कुनै पनि तारा भन्दा ठूलो छैन वा ब्रह्माण्डको ब्रह्माण्डको अन्य सामग्री।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सूर्यको आकारको ब्ल्याक होलले हामीलाई सूर्यमा भन्दा बढी बलको साथ आकर्षित गर्न सक्दैन। सूर्यको आकार ब्ल्याक होल सौर्यमण्डलको केन्द्र हुनसक्दछ जुन पृथ्वीले पनि यसै गरी परिणत गर्छ। वास्तवमा, यो ज्ञात छ कि मिल्की वे (मध्यभाग जहाँ हामी छौं) कालो प्वालबाट बनेको छ।
ब्ल्याक होल पावर
यद्यपि यो सँधै सोचिएको छ कि ब्ल्याक होलले आफु वरपर सबै थोक आफैंमा खिच्छ र यसलाई समाहित गर्दछ, यस्तो मामला त्यस्तो छैन। ग्रहहरू, प्रकाश, र अन्य सामग्रीहरूलाई कालो प्वालले निल्नको लागि क्रममा यसको कार्य केन्द्रतिर आकर्षित हुनको लागि यो निकट पास गर्नुपर्नेछ। एक पटक कुनै फिर्ताको बिन्दुमा पुगेपछि, तपाइँ घटना क्षितिजमा प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ उम्कन असम्भव छ।
र यो यो हो कि एक पटक घटना क्षितिज प्रविष्ट गरिसकेपछि हामी सार्न सक्षम हुनुपर्नेछ, हामीले प्रकाश यात्रा गरेको भन्दा बढ्दो गतिमा सर्न सक्षम हुनुपर्नेछ। कालो प्वाल आकार मा धेरै सानो छ। ब्ल्याक होल जस्तो कि केहि आकाशगंगाको मध्यमा भेटियो, यसको करिब million लाख किलोमिटरको दायरा हुन सक्छ। यो हाम्रो जस्तो करीव sun सूर्य हो।
यदि ब्ल्याक होलमा हाम्रो सूर्यको द्रव्यमान रहेको भए, यसको व्यास3किलोमिटर मात्र हुन्छ। जहिले जस्ता, यी आयामहरू अत्यन्तै डरलाग्दो हुन सक्दछन्, तर ब्रह्माण्डमा सबै त्यस्तै हो।
आकार र अन्धकार मा यति सानो सानो भएकोले हामी त्यसलाई सीधा अवलोकन गर्न सक्दैनौं। यस कारणले गर्दा वैज्ञानिकहरूले यसको अस्तित्वमा श long्का गरे। त्यहाँ केहि भनेर चिनिन्छ तर त्यो सीधा देख्न सकिदैन। ब्ल्याक होल हेर्नका लागि तपाईले अन्तरिक्षको क्षेत्रको माप मापन गर्नुपर्दछ र क्षेत्रहरू खोज्नु पर्छ जहाँ ठूलो मात्रामा गाढा द्रव्यमान छ।
धेरै कालो प्वालहरू बाइनरी प्रणाली भित्र पाइन्छन्। यसले उनीहरूको वरिपरि ताराबाट ठूलो मात्रामा द्रव्यमान आकर्षित गर्दछ। जसरी यो जन आकर्षण गर्छ, तिनीहरू ठूला र ठूला हुन्छन्। एक समय आउँदछ जब साथी तारा जुनबाट तपाईंले वस्तु निकाल्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा हराउँछन्।
मलाई आशा छ यसले कालो प्वालको बारेमा अझ बढी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » काला प्वालहरू